Astropad Studio inosarudza yeiyo kunyorera system | IPhone nhau
Astropad Studio inosarudza yeiyo kunyorera sisitimu
Pamusangano wekupedzisira wevanogadzira, vakomana vanobva kuCupertino vakaratidza nzira nyowani yekutengesa mafomu avo: kuburikidza nekunyorera kwegore, kuti vagone kunakirwa neshanduro dzekupedzisira pasina kana kubhadhara huwandu hwayo nyowani. , chimwe chinhu icho Tweetbot yatiitira, asi handiyo yega, sezvo Infuse yatove yakasarudza iyi sisitimu yekunyorera, kuti tikwanise kutenga iyo vhezheni itsva ye12,99 euros uye kukanganwa nezvayo kana kubhadhara kunyoreswa kwegore kwe6,99 euros uye isu tichafadzwa neese matsva uye shanduro nyowani dzinotangwa nekambani. Buda pachena kuti Apple yakarovera ichi zano uye vagadziri vari kuchimbundikira nemaoko maviri.
Yekupedzisira iyo yatamirawo kune ino yekunyorera system ndeye Astropad Studio application, chishandiso chakanangwa chete iyo iPad Pro uye chinotibvumidza kuburitsa zvese zvirimo zvatinogadzira pane yedu iPad pane iyo Mac skrini. Asi zvakare iyo Astropad vakomana Studio vane akawedzera a inenge isina musono kusangana neApple Penzura kuwedzera kune yakawanda nhamba yesarudzo iyo inofadza vashandisi vanoshandisa iyi application mune yehunyanzvi nzira.
Astropad Studio inotiratidza zvirimo zvekushandisa nemufananidzo watiri kugadzira, kuburikidza neWiFi kana kuburikidza ne USB tambo, iine mashoma latency. Iyi yazvino yekuvandudza inosanganisira mitsva mabasa akadai seLiquid Extreme, gadziriso yemavara inogadzirisa kugadzirisa uye mavara eretina skrini neMagic Gestures, akateedzana emabasa matsva ayo atinogona kushandisa iko kusanganisa neminwe yedu kugadzira mabasa anoshamisa. Mutengo wekunyoresa kwegore kune Astropad Studio ndeye 72,99 euros nepo kunyoreswa kwemwedzi pamwedzi kuchienzana ne8,49 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Astropad Studio inosarudza yeiyo kunyorera sisitimu
Nei kana ukatenga iPhone sekambani iwe unongova newarandi yegore rimwe chete?